अबको दिनमा जनसंघर्ष र नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता छ : उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
० चुनाव नजिकिदै गर्दा कत्तिको प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
– व्यस्त नै छु भन्नुपर्यो । प्रचारप्रसारको कामलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढीरहेको छु ।
० तपाईले उम्मेदवारी दिनुभएको क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरु छन्, ति समस्याहरुलाई कसरी आँकलन गरिरहनु भएको छ ?
– अत्यन्तै पिछडिएको जिल्ला हो, सप्तरी । जहाँ कलकारखानाहरु छैनन्, राम्रो अस्पताल, स्वच्छ खानेपानी, स्वस्थकर पर्यावरण लगायत केही स्रोत साधन नभएको जिल्ला हो । सप्तरीका दक्षिण ग्रामीण भेगमा जाने हो भने अझै पनि त्यहाँ दुर्गम क्षेत्र जस्तै छ । बाटो, बिजुली, खानेपानी केही नभएको अभाव नै अभावले भरीएको छ । त्यस क्षेत्रको विकास गर्नका लागि नै पार्टीले मलाई छानेर पठाएको हो ।
० सांसदहरु त पहिला पनि थिए, तर किन त्यस क्षेत्रको विकास हुन सकेन ?
– सप्तरी जिल्ला मात्र होइन सम्पूर्ण तराई नै अभावपूर्ण छ । यस्ता ठाउँहरुमा विकास नहुनुको २ कारण छ । पहिलो त राज्यसत्ताबाट सबै कुराहरुमा विभेदमा पारिएको र तराईको विकासलाई देशकै विकासको रुपमा नहेरेकोले त्यस क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो । अर्को त तराईले सबल नेतृत्व पो प्राप्त गर्न नसकेको हो कि, आफ्नो अधिकार पनि दिलाउन सकोस् र विकास पनि गर्न सकोस, विगतमा यसको पनि अभाव देखिएको हो । देशको नितिनिर्माणमा नै तराईलाई उपेक्षा गरेर राखेको छ ।
० जति दक्षिण भेगमा गयो उती विकास कम छ यस्तो हुनुमा राज्य मात्रै दोषी हो कि अरु पनि दोषी छन् ?
– राज्यले लगानी गरेको भए त विकास भैहाल्थ्यो नि । राज्यले चाहेन, तराई क्षेत्रमा अत्यन्त कम लगानी गर्यो । त्यसले गर्दा विकास हुन सकेन । तराईको उत्तरमा हेर्ने हो भने अर्कै दुनिँया छ, तराईमा दक्षिणमा हेर्ने हो भने अर्कै दुनिँया छ । अत्यन्तै पछौटेपनमा बाँच्न बाध्य छन् जनता, ति चुनौतिहरुको सामना गर्दै अब विकासका कार्यहरुलाई तिव्र गतिमा अगाडी बढाउनु, मधेशका जनताको अधिकारको संघर्षका लागि उनीहरुको अधिकार, समानताको हक, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशिता र प्रादेशिक सुशासन र स्वायत्तता प्राप्तिको जुन अभियान छ, त्यो अभियानलाई अगाडी बढाउने यि दुईटा मुख्य चुनौती रहेको छ ।
० सप्तरी क्षेत्र नं. २ का जनताको प्राथमिकता के हो ?
– जनता त सबै खालका छन्, सचेत जनताको कुरा गर्ने हो भने विकास चाहन्छन् । उनीहरुले अधिकार चाहेको छ । जनताले विकास र अधिकार दुवै चाहेको छ । आफ्नो स्वाभिमान र सम्मानको साथ बाँच्न चाहेको छ र देशको साधन र स्रोतको भागिदार हुन चाहेका छ ।
० तपाईकै क्षेत्रभित्रको राजविराज नगरपालिका अहिलेसम्म महानगरपालिका हनु नसक्नुको कारणहरु के के छन् ?
– राजविराज नगरपालिकालाई नगरपालिका भन्दा पनि नरकपालिका बनाईएको छ । देख्दाखेरी नगरपालिका जस्तो पनि देखिदैन । जता हेर्यो उजाड मात्र देखिन्छ । यसलाई सुरुमा त पुर्ननिर्माण गरेर विकासका गतिलाई अगाडी बढाउने, राज्यको स्रोत र साधनलाई पहुँच बढाउने, यस्ता क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा लगानी बढाउने, त्यहाँको जनताको अधिकार प्राप्तीको कुरालाई अगाडी बढाउने । यि विविध असमानता रहेसम्म विकास गति अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो इतिहासले प्रमाणीत गरिसकेको छ ।
० राज्यले कम लगानी गरेर विकास हुन सकेन भन्नुहुन्छ, तर राज्यले त पहाड र तराईमा बराबर लगानी गरीरहेका छौँ भनेको छ तर पनि किन विकास हुन सकेन ?
– तपाईले विगतका बजेटहरु हेर्नुभयो भने तराईका लागि भनेर जम्मा १४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको छ । जहाँ देशको आधा जनसंख्या बस्छ, ७६ प्रतिशत भन्दा धेरै आन्दाीनका स्रोतहरु रहेका छन् जहाँ विकासको सम्भावना रहेको छ, त्यस्तो ठाउँमा सरकारले अत्यन्तै न्युन लगानी गरेको छ ।
० तपाईले तराईमा न्यून बजेट राज्यले छुट्याउछ भन्नुभयो, त्यहि न्यून बजेट पनि सदुपयोग भएको छ कि छैन त ?
– बजेटको सदुपयोग त पूर्ण रुपमा कतै पनि भएको छैन । यो राज्य संस्थागत रुपमा भ्रष्टचार, कमिशनतन्त्र, गुण्डातन्त्रको राज्य भएको छ । यहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई भ्रष्टचारतन्त्र, माफियातन्त्र र कमिशनतन्त्रले चलाएको छ । त्यसकारणले यसको असर देशको सबै भागमा रहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा पनि छ । भ्रष्टहरुका नाईके सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्दछन् ।
० प्रदेश नं. २ मा त मधेशी दलकै पकड रहेको अवस्थामा यो प्रदेशका मतदातालाई के कस्ता अधिकार दिएको पाइन्छ ?
– नेपालमा नाम मात्रको संघीयता रहेको छ । संघीयताको नाममा विकेन्द्रीकरणको काम भएको छ । जबसम्म प्रदेशमा स्वायत्तता आउँदैन तबसम्म सुशासन जनताले पाउँदैनन् । जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार हुँदैन, स्वायत्त प्रदेश हुँदैन, अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुँदैन तबसम्म संघीयता भन्ने कुरा यर्थाथमा, स्वाभिमानमा संघीयता प्रणली देखाउने विकास हुँदैन । अहिलेको नेपालको संघीयता प्रणाली भनेको खोल मात्र हो, भित्रको वस्तु भने एकात्मकमा नै केन्द्रीकरण रहेको छ । अहिले भन्ने हो भने स्थानीय निकायलाई जति अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको छैन । यस्तो किसिमको संघीय प्रणालीलाई गलत ढंगले लागु गर्ने र त्यसलाई असफल बनाईदिने र संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र रचेको पाइन्छ ।
० त्यसो भए त सबैभन्दा पहिले संघीयताकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ?
– हामीले हरेक पाइला–पाइलामा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० चुनावको विषयमा तालमेल गर्दा तपाईहरुसँग कांग्रेसले एकतर्फी मात्र गर्यो भन्ने गरिन्छ तर दुईतर्फी किन हुन सकेन, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– हो, हामीले केही जिल्लाहरुमा कांग्रेसलाई छौड्यौँ र कांग्रेसले पनि एक जिल्लामा हामीलाई छोडेको छ । तर, सप्तरी २ मा भने फिर्ता हुन सकेन कांग्रेसको उम्मेदवारी । तर पनि सहयोगको भावना होला भन्ने आश छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त कांग्रेसले उदार नीति लिन सकेन । सबैलाई समेटेर उदार नीति अपनाउन सकेन । सबै ठाउँ, सबै क्षेत्र आफैलाई चाहिने, अरुलाई दिन नखोज्ने नीतिले यो भएको हो ।
० अहिले तपाईहरुले राजपाकासँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुभएको छ, यस गठबन्धनलाई चुनावपछि पनि कायमै राख्न के गर्नुपर्ला ?
– परस्परमा सद्भाव, सहयोग कायम नै रह्यो भने सहकार्य पनि जारी नै रहन्छ ।
० त्यसलाई दिर्घकालसम्म बनाईराख्न के गर्नुपर्ला ?
– एक हातले ताली बज्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई पनि थाहा छ । सहकार्यमा विश्वसनियता कायम रहिरह्यो भने अगाडी बढ्दै जान्छ । विश्वासले नै सद्भावना अगाडी बढ्ने हो ।
० बाम गठबन्धनले पछि गएर पनि एउटै पार्टी हुनेछौँ भनिरहेको छ, के तपाईहरुबीच पनि त्यो सम्भावना छ ?
– हामीबीच तत्कालको लागि त्यो सम्भव छैन तर भविष्यमा गएर हुन सक्छ, त्यो आवश्यक पनि छ ।
० कांग्रेसका नेताहरुले अहिले भैरहेको बाम गठबन्धनलाई १० वर्षपछि यिनीहरुले साम्यवाद ल्याइदिन्छन् भन्ने आरोप लगायका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
– यो गठबन्धन देखेर कांग्रेस तर्सेको हो । यिनीहरु कम्युनिष्ट नै होइन कहाँबाट साम्यबाद ल्याउँछ । कम्युनिष्ट भएको साम्यवाद आउँछ, यिनीहरु त अवसरवादी, भ्रष्टचारीहरुको जमात हो । माओवादीहरु माक्सवाद, लेलिनवादलाई भुलेर भ्रष्टचार र कमिशनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । त्यसकारण कांग्रेस नतर्से पनि हुन्छ । यो गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि मात्र भएको हो यसको कुनै भविष्य छैन ।
० संविधान संशोधन गछौं भनेर कांग्रेसले पनि भन्दै आएको छ नि ?
– कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट जोसुकै होस् संविधान संशोधन गरेर शोषित जनतालाई अधिकार दिन कसैले चाहेका छैनन् । संविधान संशोधन एकचोटि भयो तर त्यसले हामीलाई कुनै अधिकार दिन सकेको छैन । हामी आन्दोलन गछौं क्रान्ति गछौं परिवर्तन ल्याउँछौं र आफ्नो अधिकार आफैं लिन्छौं । हामी कांग्रेस, एमालेबाट अधिकार किन लिने अधिकार त जनताले दिने हो नि त्यसैले अबको दिनमा जनसंघर्ष र नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता छ ।